Micnaha Riyada - Fasiraadda & Qaamuuska Rasmiga ah
Waa maxay macnaha riyada masaska?
Maxay ka dhigan tahay riyada ilmaha?
Maxay ka dhigan tahay riyada saxarada ama saxarada?
Maxay ka dhigan tahay riyada sheydaanka ama jinka?
Maxaa loola jeedaa in lagu riyoodo saaxirad iyo sixir?
Waa maxay macnaha riyada oohinta?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyootid in lagu muday ama lagaa muday?
Micnaha riyoodida kaadida
Micnaha riyada ilkaha ama in ilkahaagu soo dhacaan
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyootid in lagu toogtay ama lagaa toogtay?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyootid inaad laabanayso qofka aad wada nooshahay?
Maxay ka dhigan tahay riyada biyaha?
Maxay ka dhigan tahay inaan ku riyoodo biyo saafi ah?
Maxay ka dhigan tahay inaan ku riyoodo biyo wasakh leh?
Micnaha riyo ku saabsan biyo nadiif ah
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyoodaan caarada?
Maxaa loola jeedaa inaad ku riyootid xashiishka?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyooto hangarallayaal ama hangarallayaal?
Iyada oo B
Maxay ka dhigan tahay riyada nibiriyada?
Maxay ka dhigan tahay riyada baaskiil?
Maxay ka dhigan tahay riyada qashinka?
Maxay ka dhigan tahay riyada qubeyska?
Maxay ka dhigan tahay riyada baranbarada?
Maxaa loola jeedaa inaad ku riyooto coronavirus?
Maxay ka dhigan tahay riyada yaxaasyada?
Maxay ka dhigan tahay riyada qabuuraha?
Maxay ka dhigan tahay riyada shukulaatada?
maxaa loola jeedaa riyada ilkaha leh?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyootid in ilkuhu kaa soo dhacayaan?
Maxay ka dhigan tahay riyada hoonbarrooyinka?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyooto adigoo qaawan?
Maxay macnaheedu tahay in riyadu ku riyooto?
Maxay ka dhigan tahay riyada jaranjarada?
Iyada oo F
Maxay ka dhigan tahay riyada xaflad?
Waa maxay macnaha riyada cirfiidku?
Maxay ka dhigan tahay riyada dagaalka?
Maxay ka dhigan tahay in lagu riyoodo kooxo waaweyn?
Waa maxay macnaha riyada ku saabsan bisadaha?
Waa maxay macnaha riyooyinka shilinta?
Maxay ka dhigan tahay riyada digaagga?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyootid gooryaan?
Iyadoo uu H
Maxay ka dhigan tahay riyada cisbitaal?
Maxay ka dhigan tahay riyada quraanjada?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyooto inaad naftaada nacas ka dhigto?
Maxay ka dhigan tahay riyada beedka?
Iyada oo L
Iyada oo leh
Iyada oo P
Iyada oo R
Qoyska iyo asxaabta
Haweenka iyo carruurta
Ma xiisaynaysaa inaad ogaato fasiraadda iyo macnaha riyadaada? Weligaa ma istaagtay inaad ka fikirto riyadan riyood ee soo noqnoqota oo aan kuu oggolaanayn inaad nasato? Waa maxay miyir-qabka isku dayaya inuu kuu soo gudbiyo markaad seexanayso sidee baanse ugu samayn karnaa fasiraad sax ah fekerkeenna habeennimo?
Waxaa laga yaabaa inaadan aqoon, laakiin habeenkii maskaxdeennu weli way firfircoon tahay oo way riyoon kartaa iyadoo aan loo eegin sida ay maalintu u daashay. Waxaa intaa dheer, riyo kasta oo aan leenahay gabi ahaanba way ka duwan tahay, xisaabta ku darso macnaha riyada iyo barashada tarjumida qorshayaasheeda adag waxay kaa caawin doontaa inaad sifiican isku barato naftaada.
Barashada macnaha iyo tarjumaad riyada Waa shay welwel iyo amakaag ku abuuray aadanaha ilaa waagii beryaba. In kasta oo waqtiyadii hore qeexitaanka astaamaha riyada ay raadinayeen inay helaan farriin rabbaani ah, laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad iyo horumarka cilmu-nafsiga, fasiraadda riyada waxaa loo adeegsadaa in lagu muujiyo waxyaabaha ku kaydsan miyir la'aanta maskaxda aadanaha ama welwelka maalinta. naga dhex dhib dadka kale.
Hada mahadsanid falanqeeyayaasha cilmu-nafsiga sida caanka ah Sigmund Freud, Faransiiska Jean Laplanche iyo Jean-Bertrand Pontalis ama Switzerland Carl Gustav Jung fasiraadda riyada way joogsatay in loo arko wax aan halis ahayn waxayna noqotay farsamo caafimaad. Haddii aad xiiseyneyso mowduuca, halkan waxaad ku haysaa xiriirin ku saabsan tixraaca buug-qorista iyo qorayaasha aan jeclahay.
1 Baro macnaha riyada si bilaash ah qaamuuskeena qaaska ah
2 Qaamuuska riyada rasmiga ah: tarjumaadu mar dambe sir kugu noqon mayso
3 Samee fasiraad riyo oo soo hel macnaheeda
4 Fasiraadda vs macnaha riyada
5 Fasiraadda Riyooyinkii Hore
6 Waa maxay riyadu?
7 Cilmi-nafsiga iyo tarjumaadda Freud
8 Cilmu-nafsiga falanqaynta ee Carl Jung
9 Qaamuus si loo fasiro macnaha riyada
10 Yaan ahay
11 Waa maxay heerarka hurdada
11.1 Marxaladda I: marxaladda kabuubyada
11.2 Wejiga II: marxaladda hurdo fudud
11.3 Wajiga III: marxaladda kala guurka
11.4 Wejiga IV: marxaladda hurdada ee qoto dheer
11.5 Wajiga hurdada REM
12 Riyooyinka ugu badan
13 Waano inaad riyo ku xasuusato
14 Micnaha riyada
Baro macnaha riyada si bilaash ah qaamuuskeena qaaska ah
Khadadka soo socda waxaad ka heli kartaa liiska macnaha riyooyinka laga dalbaday AZ, si ay kuugu fududaato isticmaalka webka. Riyooyinkan oo dhami waa isku dhaf u dhexeeya uruurinta riyooyinkii ugu muhiimsanaa ee ay daweeyeen qorayaasha ugu caansan iyo qaar ka mid ah wax ku biirintayda oo ku saleysan waaya-aragnimadayda riyooyinkii aan soo maray iyo in aan falanqeeyay oo aan si faahfaahsan u bartay sannado.
Waa liis aad u dhameystiran laakiin wuxuu ku sii socdaa isbeddel joogto ah, Haddii aad leedahay riyo adiga kaa walwalsan taas oo iyaduna soo noqnoqota kumana muuqato liiska waxaan kaa codsanayaa farriin iigu soo qor qeybta xiriirka ee shabakadda oo waxaan baari doonaa kiiskaaga waxaanan kudarrayaa riyadaas liiska si kuwa kale ee isticmaala ay ogaadaan.
Waxaa la gaadhay waqtigii lagu heli lahaa riyada kaa welwelaysa. Halkan waxaad ku haysaa liistada qaab alifbeeto ahaan ah.
Riyooyin ka bilaabma A
Maxay ka dhigan tahay riyada naxashka?
Maxay ka dhigan tahay riyada gaari, gaari ama gaari?
Maxay ka dhigan tahay riyada dil ama dil?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyoodaan saaxiibo?
Waa maxay macnaha riyada malaa'igaha?
Maxay ka dhigan tahay riyada shinnida?
Maxay ka dhigan tahay riyada cirbadaha?
Maxay ka dhigan tahay riyada diyaarad?
Micnaha riyood in caaro kaa qaniinto
Riyooyin ku bilaabma B
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyoodaan slugs?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyooto guumays iyo guumays?
Maxay ka dhigan tahay riyada rasaasta?
Maxay ka dhigan tahay riyada cayayaanka iyo cayayaanka?
Waa maxay macnaha riyada qoob-ka-ciyaarka?
Maxay ka dhigan tahay riyada arooska?
Riyooyin ku bilaabma C
Maxay ka dhigan tahay riyada abeesooyinka?
Maxay ka dhigan tahay riyadii mindi?
Maxay ka dhigan tahay riyada inaad ku dhacdo booska?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyooto carsaanyo?
Maxay ka dhigan tahay riyada tuke?
Riyooyin ka bilaabma D
Maxay ka dhigan tahay riyada dagaal ama muran?
Maxay ka dhigan tahay riyada inaad lacag hesho?
Riyooyin ka bilaabma E
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyooto saaxiibkaa hore ama saaxiibtiis hore?
Maxay ka dhigan tahay riyo maroodiga?
Maxay ka dhigan tahay riyada uurka?
Riyooyin ka bilaabma F
Maxay ka dhigan tahay riyada Facebook?
Maxay ka dhigan tahay riyada naarta?
Maxay ka dhigan tahay riyada ubaxa?
Maxay ka dhigan tahay riyada midhaha?
Maxay ka dhigan tahay riyada ehelka dhintay
Riyooyin ku bilaabma G
Riyooyin ka bilaabma H
Riyooyin ka bilaabma aniga
Maxay ka dhigan tahay riyo daad?
Maxay ka dhigan tahay riyada kaniisadda?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyooto gaalnimo ama in lagu khiyaaneeyo?
Riyooyin ka bilaabma L
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyootid gooryaanka?
Maxay ka dhigan tahay riyada libaaxyada?
Maxay ka dhigan tahay riyada yeyda?
Maxay ka dhigan tahay riyada mulacyada?
Maxaa looga jeedaa riyo roob?
Maxay ka dhigan tahay riyada shaybaarka?
Maxay ka dhigan tahay riyada furayaasha?
Riyooyin ka bilaabma M
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyooto in lagu dilay?
Maxay ka dhigan tahay riyada dilka?
Maxay ka dhigan tahay riyada daanyeerada?
Maxay ka dhigan tahay riyada shandadaha?
Maxay ka dhigan tahay riyada duqsiga?
Maxay ka dhigan tahay riyada dhimashada?
Maxay ka dhigan tahay riyada qof dhintay?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyoodaan qadaadiic iyo biilal?
Riyooyin ku bilaabma N
Waa maxay macnaha riyada lambarada?
Waa maxay macnaha riyada dabaasha?
Maxay ka dhigan tahay riyada carruurta?
Waa maxay macnaha riyada barafka?
Riyooyin ka bilaabma O
Waa maxay macnaha riyada dahabka?
Maxay ka dhigan tahay in lagu riyoodo mowjadaha waaweyn?
Maxay ka dhigan tahay riyada ouija?
Riyooyin ku bilaabma P
Maxay ka dhigan tahay riyada cudurrada faafa?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyoodaan injirta?
Maxay ka dhigan tahay riyada barkadda dabaasha?
Maxay ka dhigan tahay riyada eeyaha?
Maxay ka dhigan tahay riyada kalluunka ama kalluunka?
Adoo ku riyoonaya in lagu eryanayo ama lagu eryanayo
Maxay ka dhigan tahay riyada booliska?
Maxay ka dhigan tahay riyada qoolleyda?
Maxay ka dhigan tahay riyada rootiga?
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyootid inuu eey kaa qaniinay?
Riyooyin ka bilaabma R
Maxay ka dhigan tahay riyada jiirka?
Maxay ka dhigan tahay in lagu riyoodo dharka?
Maxay ka dhigan tahay riyada tokaha iyo rahyada?
Maxay ka dhigan tahay riyada saacad?
Maxay ka dhigan tahay riyada wabiga?
Riyooyin ka bilaabma S
Waa maxay macnaha riyada dhiig?
Maxay ka dhigan tahay riyada afduubka?
Maxay ka dhigan tahay riyada zombies?
Riyooyin ka bilaabma T
Maxay ka dhigan tahay inaad ku riyootid shark?
Maxaa loola jeedaa inaad ku riyooto dibi?
Maxay ka dhigan tahay riyada tsunami?
Waa maxay macnaheedu in lagu riyoodo dhulgariir ama gariir?
Maxay ka dhigan tahay riyada shabeellada?
Maxay ka dhigan tahay riyada tarantulas?
Waa maxay macnaha riyada dhulka?
Maxay ka dhigan tahay riyada duufaannada iyo duufaannada?
Riyooyin ku bilaabma V
Maxay ka dhigan tahay riyada safarka ama safarka?
Maxaa loola jeedaa in lagu riyoodo lo'da?
Maxay ka dhigan tahay riyada fulkaanaha?
Maxay ka dhigan tahay riyada duulista ama xaraashka?
Maxay ka dhigan tahay riyada dharka arooska?
Maxay ka dhigan tahay riyada matagga?
Waa maxay macnaheedu in lagu riyoodo vampires?
Markaanu seexanno, waxaannu galnaa safar qaali ah oo muujinaya himilooyinkeenna iyo cabsidayada. Saacadaha nasashada waxay safar u yihiin dhibaatooyinka maalinba maalinta ka dambeysa, welwelkaas oo maskaxdayada ku soo duulay, sidaa darteedna ay muhiim tahay in la fahmo tarjumaad riyada si loo cadeeyo macnaheeda.
Qaamuuska riyada rasmiga ah: tarjumaadu mar dambe sir kugu noqon mayso
Waqtiyadi hore, dhaqamadu waxay iskudayeen inay ogaadaan sida loo fasiro riyo kasta, qaarna qaab suugaaneed iyo isjiidjiid ah, laakiin kuwa kale waxay raaceen habka sayniska. Taasi waa, sida ilbaxnimo kasta oo kale, waxaa jiray sumcad-yaqaanno caan ah iyo cilmi-nafsi yaqaanno.
Wax kasta oo ku dhaca miyir-qabkayaga marka aan riyoonayno waxay u adeegi karaan inay xalliyaan shakiyo badan oo aynaan fahmi karin inta lagu guda jiro soo jeedka. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay sababta ay bina-aadamku qarniyo badan ugu daba joogeen macnahooda ogow wax walba oo maskaxda ku saabsan iyo shakhsiyadda qofka.
Samee fasiraad riyo oo soo hel macnaheeda
Runtii ma waxaan leenahay riyooyin aan horay loo arag? Maxay u matalaan hamigeenna iyo cabsigeenna? Muxuu miyirka hoose u abuuraa fikrado aan la fahmi karin? Mararka qaarkood waan layaabi karnaa kakanaanta riyada. Waxaan ku riyooneynaa inaan wajahno shaqadeena, in qof reerka ka mid ah uu dhinto ama aan kala tagno lamaanaheena. Taasi waa, iyagu waa riyooyin la xiriira deegaankeena, mararka qaarna waxay umuuqdaan kuwo dhab ah oo aan raadineyno macno ku saabsan farriinta riyada ee miyirka hoose uu noo soo diro. Hadaad rabto inaad ogaato sida loo sameeyo turjumaad sax ah riyadaada guji halkan.
Fasiraadda vs macnaha riyada
Ogaanshaha macnaha riyadu lamid tahay tarjumaadda. Si aad u ogaato sida saxda ah ee loo fasiro riyada, ma aha oo kaliya inaad sifiican u garato macnaheeda, laakiin sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad ogaato faahfaahinta kale ee muhiimka ah iyo macnaha guud taas oo ay ka dhacaan, maadaama isla macnaha riyadu uu yeelan karo dhowr fasiraad oo aad u kala duwan oo ku saabsan dad kala duwan maxaa yeelay waxay saameyn ku yeelan doontaa macnaha macnahaasi ku saabsan yahay sida aad u tahay, qoyskaaga, deegaankaaga, xaaladdaada jacayl, caafimaadkaaga ama xitaa xaaladaada dhaqaale. Tusaale ahaan, isku mid ma aha riyo dahab ah hadaad taajir tahay hadaad sabool tahay. Dhamaadka riyadu waa isku mid, laakiin fasirka ayaa aad u kala duwan.
Fasiraadda Riyooyinkii Hore
Griiggu horeba way u xiiseynayeen mowduucan. Laakiin waagaas, nidaamkiisa isku dayga inuu fasiro riyada waxaa xukumayay dhaqan afka ah. Taasi waa, dhammaan fikradahaas oo jiilba jiil u sii gudbinayay iyo inta badanba, waxay ahaayeen doonista ilaahyada maxaa lagu arkay riyadaas.
Laakiin dhinaca kale ee caqiidadan, qorayaashu waxay jecel yihiin falsafad Plato ama Aristotle Waxay sidoo kale ku qoreen ra'yigooda ku saabsan arinta buugaag ay ka mid yihiin Jamhuuriyada koowaad iyo tan ku saabsan riyada labaad. Iyadoo aan la iloobin taas, wakhti ka dib, Pythagoras sidoo kale wuxuu ka hadlay arintan isagoo ah qaab isgaarsiin loogu talagalay dadka ka sarreeya. Halka Stoics-ku ay ku sharfaan bixinta. Mar dambe ayaa fikradaha cusub ee Cicero ama Artemidoro iman doonaan.
Isku dayga inaad qiyaasto waxa hareeraheena ka dhacaya, iyo riyooyinka, waxaa lagu magacaabaa riyo. Laakiin kaliya riyooyin, maxaa yeelay markii ay jiraan riyooyin riyooyin ah, waxaa la sheegay in Ibliisku bilaabay iyaga mana aysan mudnayn in la falanqeeyo. Waa run in kastoo ay jiraan aragtiyooyin jira oo dhan, tan farsamo faal, wuxuu ku saleysan yahay daraasadihii Sigmund Freud.
Cilmi-nafsiga iyo tarjumaadda Freud
Qaar ka mid ah fikradaha ama daraasadaha la imaan lahaa Freud waxay horey u lahaayeen aasaaskooda waxa aan soo sheegnay. Taasi waa in la yiraahdo, iyagu ma noqon doonaan sheeko, maadaama dhaqanku aad ugu dhex jiray iyaga. Laakiin, in kasta oo ay tahay erey adag oo la falanqeeyo, waa in la yiraahdaa Freud wuxuu u yimid inuu qodob dhigo oo uu raaco. Waxaan doonayay inaan muujiyo taas astaamo ka turjumaya riyadaWaxay la xiriireen maskaxdeena iyo miyir la'aanta.
Sababtaas awgeed, markaan falanqeyneyno riyo, waa inaan qaadanno dhammaan fikradaha iyo fikradaha aan ku aragno dhexdeeda oo aanan la sii joogin mid keliya. Sidoo kale laguma dari karo farsamooyin khuraafaad ama tarjumaad nooc soojeedin ah. Xidhiidhka iyo cilaaqaadka nolol maalmeedkeena sidoo kale waxay noqon doonaan kuwa leh tixgalin weyn. Dhamaan riyadiina, Freud wuxuu siiyay magaca 'riyada caadiga ah' kuwa inta badan noogu soo noqnoqda. Tusaale ahaan kuwa la xiriira dhimashada ama dhicitaanka. Maaddaama dhammaantood waxay daaha ka qaadi kartaa isku dhac gudaha ah. Marka la soo koobo, wuxuu ku andacooday in riyadu ay tahay waddo aada gudaha iyo hamigeenna qarsoon.
Cilmu-nafsiga falanqaynta ee Carl Jung
Haddii aan baranay Freud, waa run inaanan illoobi doonin Jung sidoo kale. Wuxuu sidoo kale xoogaa wareersanaa fikradaha kii ugu horeeyay, laakiin dhakhtarka dhimirka ee Switzerland ayaa talaabo dheeri ah qaaday. Hadal ahaan, riyadiisii ​​isaga ayaa ahaa wax soo saar dabiici ah. Maalin kasta wuxuu ku arki jiray bukaankiisa dhibaatooyin dhalanteed ah iyo sidoo kale riyooyin iyo riyooyinkan oo lagu daray waxay lahaayeen burushyo caan ku ah qaar sheekooyinka quraafaadka.
Marka halkaas ayuu ku gartay in uusan had iyo jeer xiriir toos ah la lahayn waxa qofku ku noolaa ama dareemay. Taasi waa sababta uu ugu yeeray wadajirka miyir la'aanta. Waxaas oo dhami waxay noqon doonaan nooc ka mid ah astaamaha habdhaqanka ee aadamuhu dhaxlo oo lagu qeexi karo inay yihiin qadiimiga ama dareenno nafleyda qaarkood. Markaa marka la soo koobo, waxa Jung doonayay inuu gudbiyo waa taas riyooyinku waxay macno ka leeyihiin waaya aragnimadeena waxayna buundo u noqon lahaayeen baahiyaha nafta.
Qaamuus si loo fasiro macnaha riyada
In kasta oo qayb wanaagsan oo riyada ka mid ahi ay xukumaan mawduuc, haddana waxaa jira waxyaabo badan oo leh macne qeexan. Baaritaanka taxaddar leh ee xubnahan waxaa loo adeegsaday in lagu ururiyo dhammaan xogta ku jirta a Qaamuuska riyada, buug uu qofkasta ku turjumi karo tooda.
Hadaad danaynayso soo ogow waxa riyadu macnaheedu tahay, fahmaan waxa ay matalaan iyo astaamahooda, qaamuuskeena riyada waxaad ku qooyn kartaa dhammaan macluumaadka gebi ahaanba bilaash ah. Waxaad si fiican isku baran doontaa fariimahaaga miyir-qabkaaga waxaadna ogaan doontaa sida loo turjumayo welwelkaaga dhabta ah. Daaran macnaha-suenos.com waxaad awoodi doontaa inaad gaarto heerar qoto dheer oo is-dhexgal shakhsi ahaaneed iyo horumar xagga ruuxi ah adigoo raadinaya macnaheeda.
Magacaygu waa Nacho Zarzosa waxaanan ahay qofka ka dambeeya degelkan. Waxaan haystaa shahaadada cilmu-nafsiga ee Kulliyadda cilmu-nafsiga ee Jaamacadda Oviedo oo aad u jecel macnaha riyada iyo cilmu-nafsiga. Waad arki kartaa dhammaan macluumaadka aniga igu saabsan riix halkan.
Waa maxay heerarka hurdada
Ogaanshaha mid kasta oo ka mid ah wejiyada kala duwan ee hurdada ayaa wax badan naga caawin kara si aan u helno hurdo aad u raaxo badan oo aan si fiican ugu nasano. Tani waa wax sidoo kale saameyn badan ku leh waxa aan ku riyoonno, sidaa darteed in wejiyada si wanaagsan loo ogaado waa muhiim.
Marxaladda I: marxaladda kabuubyada
Waa marxaladda koowaad oo ay ka mid yihiin Marka hore 10 daqiiqo oo hurdo ah, laga bilaabo marka aan ku jirno xilliga soo-jeedka illaa intaan waxoogaa lulmaynno.
Wejiga II: marxaladda hurdo fudud
Wejiga labaad ee hurdada wuxuu leeyahay muddada qiyaastii kalabar wadarta waqtiga guud ee hurdada waana marxaladda uu jirkaagu si tartiib tartiib ah uga go'do deegaanka isla waqtigaas garaaca wadnaha iyo neefsashada oo gaabisa waxay noqoneysaa mid deggan oo firaaqo badan. Marxaladdan aad ayay noogu adag tahay inaannu soo toosno, laakiin iyadoo taasi ay ku jirto wejiyadayada maskaxda ee waxqabadka weyn ee maskaxda ayaa lagu beddeli karaa kuwa kale oo aad uga yar. Caadi ahaan markaan ka soo kacno wajigan waxaan badanaaba u qabanaa si naxdin leh, tusaale ahaan markaan ku riyoonno inaan safarno ama ka soo dhacno buur.
Wajiga III: marxaladda kala guurka
Wejiga saddexaad waa kan ugu gaaban dhammaan, wuxuu socdaa qiyaastii 2 ama 3 daqiiqo wadar ahaan waana a u gudubka hurdada fudud iyo wajiga hurdada ee qoto dheer.
Wejiga IV: marxaladda hurdada ee qoto dheer
Marxaladda hurdada ee qoto dheer waxay socotaa 20% ee wadarta hurdada waana tan ugu muhiimsan dhammaantood maxaa yeelay waxay go'aamisaa tayada nasashada iyo awoodda jirku uga soo kabsan karo daalka maalinta. Qiyaasta neefsashadu aad ayey u hooseysaa cadaadiska wadnuhuna aad buu hoos ugu dhacaa, sidaa darteed sidoo kale aad ayey noogu adag tahay inaan si dabiici ah uga soo toosno wajigan.
Wajiga hurdada REM
Marxaladda hurdada ee REM waxay qaadataa 25% hurdadeena. Magaca REM wuxuu ka yimid Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Eye ee Ingiriisiga ah taasna macnaheedu waa indhuhu waxay si joogto ah ugu socdaan hoos baalasha indhaha. Dhaqdhaqaaqa maskaxda inta lagu jiro marxaladan waa mid aad u sareeya, ku dhowaad heer la mid ah sida markaan soo jeedno laakiin isla waqtigaas muruqyadayada ayaa xanniban si looga hortago inaan ka falcelino dhammaan macluumaadka ay maskaxdeedu shaqeyneyso. Inta lagu guda jiro wejigan hurdo ayaa dhacda markaa waa wajiga ugu muhiimsan ee lagu xisaabtamo degelkan.
Riyooyinka ugu badan
Dhammaan riyaduhu si isku mid ah uma wada siman yihiin, waxaa jira riyooyin ay dad badani ku xanuunsadaan, tusaale ahaan ku riyoodo qofkaagii hore ama xataa ku riyoodo inaad mar labaad dib ugu noqoto qofkaagii hore, riyo biyo, ku riyoodo saxarada, riyo duul, riyo ku saabsan xabadaha o riyo ah inaad ku dhacdo booska. Halka kuwa kale naadir yihiin sida ku riyoodo booliska. Hayso riyooyin caan ah ama mid aan caadi ahayn looma fasiri karo mid togan ama mid taban. Sidoo kale, riyo aan caadi aheyn oo hal qof ah ayaa laga yaabaa inay caadi ka tahay qof kale. Waxay la mid tahay, tusaale ahaan, ku riyoodidda booliska waxay aad ugu badan tahay haddii shaqadaadu la xiriirto booliska, sida haddii aad ka shaqeyso bangi ama isbitaal.
Waano inaad riyo ku xasuusato
Miyaad dooneysaa inaad si fiican u xasuusato dhammaan faahfaahinta riyada si aad hadhow u hesho macnaheeda? 'Waxaan kugula talinayaa inaad dhigto a warqad iyo qalin wax walba lagu qoro waxa aad ka xasuusato riyadaada isla marka aad toosto. Xusuusnow in faahfaahin kasta la tiriyo, maadaama ay macno badan yeelan karto markii si habboon loo fasirayo. Goor dambe, markaad dhammayso maalintaada, gal qaamuuskeenna oo baro astaamaha cunsur kasta si aad si fiican ugu fahamtid.
Sidan oo kale, waxaad ka heli doontaa oo keliya maaha riyooyinka iyo macnahooda, laakiin waad baran kartaa Maxay ka dhigan tahay in lagu riyoodo injirta ama macnaha riyooyin baranbaroiyo sidoo kale Fasiraadda iyo macnaha riyada lacagta soona bandhig sirta ku qarsoon moolka maskaxdaada. Hada laga bilaabo, mar dambe cudurdaar uma lihid inaad falanqeyso macnaha riyada iyo inaad si fiican isu barato habeen kasta.
Sida loo fasiro riyada
© 2022 | micnaha-suenos.com: qaamuuska rasmiga ah ee riyada & fasiraadda | Waxaa qoray Nacho Zarzosa